Anti Bitcoin စျေး - အွန်လိုင်း ANTI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Anti Bitcoin (ANTI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Anti Bitcoin (ANTI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Anti Bitcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Anti Bitcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Anti Bitcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Anti BitcoinANTI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0201Anti BitcoinANTI သို့ ယူရိုEUR€0.017Anti BitcoinANTI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0154Anti BitcoinANTI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0183Anti BitcoinANTI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.18Anti BitcoinANTI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.127Anti BitcoinANTI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.445Anti BitcoinANTI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.075Anti BitcoinANTI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0266Anti BitcoinANTI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.028Anti BitcoinANTI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.449Anti BitcoinANTI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.156Anti BitcoinANTI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.109Anti BitcoinANTI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.5Anti BitcoinANTI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.38Anti BitcoinANTI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0276Anti BitcoinANTI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0306Anti BitcoinANTI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.624Anti BitcoinANTI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.139Anti BitcoinANTI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.15Anti BitcoinANTI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩23.79Anti BitcoinANTI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7.7Anti BitcoinANTI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.48Anti BitcoinANTI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.553
Anti BitcoinANTI သို့ BitcoinBTC0.000002 Anti BitcoinANTI သို့ EthereumETH0.00005 Anti BitcoinANTI သို့ LitecoinLTC0.00037 Anti BitcoinANTI သို့ DigitalCashDASH0.000221 Anti BitcoinANTI သို့ MoneroXMR0.000226 Anti BitcoinANTI သို့ NxtNXT1.57 Anti BitcoinANTI သို့ Ethereum ClassicETC0.00296 Anti BitcoinANTI သို့ DogecoinDOGE5.8 Anti BitcoinANTI သို့ ZCashZEC0.000244 Anti BitcoinANTI သို့ BitsharesBTS0.619 Anti BitcoinANTI သို့ DigiByteDGB0.643 Anti BitcoinANTI သို့ RippleXRP0.0714 Anti BitcoinANTI သို့ BitcoinDarkBTCD0.000693 Anti BitcoinANTI သို့ PeerCoinPPC0.0667 Anti BitcoinANTI သို့ CraigsCoinCRAIG9.16 Anti BitcoinANTI သို့ BitstakeXBS0.857 Anti BitcoinANTI သို့ PayCoinXPY0.351 Anti BitcoinANTI သို့ ProsperCoinPRC2.52 Anti BitcoinANTI သို့ YbCoinYBC0.00001 Anti BitcoinANTI သို့ DarkKushDANK6.45 Anti BitcoinANTI သို့ GiveCoinGIVE43.53 Anti BitcoinANTI သို့ KoboCoinKOBO4.58 Anti BitcoinANTI သို့ DarkTokenDT0.0185 Anti BitcoinANTI သို့ CETUS CoinCETI58.05